Global Voices teny Malagasy » Korea Atsimo : Fanaraha-maso Tsy Manara-dalàna Atao Ny Mponina Sy Ny Mpanentana Fandaharana · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 16 Mey 2012 10:40 GMT 1	 · Mpanoratra Lee Yoo Eun Nandika nirinandrea
Sokajy: Azia Atsinanana, Korea Atsimo, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Fitantanam-pitondrana, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka, Politika, Zavakanto & Kolontsaina
Mirehidrehitry ny fanakianana ny Lapan'ny Filoha ao Korea Atsimo noho ny fanaraha-maso tsy manara-dalàna nataony an'ireo ny olontsotra. Ilay raharaha izay niantomboka taminà fanaratsiana nataon'ireo antokon'ny mpanohitra, dia lasa nihombo be ankehitriny ary dia notondroina mihitsy ho ny Tantara Ratsy Watergate Koreana  [ko]. Ireo Mpanentana fandaharana izay mampiantrano hetsi-panoherana manohitra ny governemanta dia nanambara fa naraha-maso sy nosavain'ireo manampahefana avy amin'ny sampam-pitsikilovan'ny governemanta ny tranon'izy ireo.
Ny Antoko Demokratika ao amin'ny firenena sy ny sendikan'ny mpiasa KBS  (Korean Broadcasting System) dia namoaka ampahana antotan-taratasy izay an'ny governemanta ahitana pejy 2600 isa eo ho eo, izay mampiseho  ny fanaraha-maso ataon'ny fitondrana amin'izao fotoana ny zavatra ataon'ny vahoakany, ao anatin'izany koa ireo mpanao gazety, mafana fo, mpikambana amin'ny antoko mpanohitra ary na ireo mpanao hatsikana izay maneho mibaribary ny firehana politikany koa aza.
Kim Jae-dong dia mpanao hatsikana fanta-dàza ary mpanolotra fandaharana izay maneho  ampahibemaso ny firehana ara-politikany ary matetika izy no endrikendrehan'ireo mpitahiry ny nentin-drazana ho ‘mpanohana ny antoko ankavia ao Korea Avaratra’. Hoy i Kim tao anatinà tafatafa iray niaraka tamin'ny Gazety boky mpanao fanadihadiana ao amin'ny firenena SisaIN  [ko] hoe niatrika lehilahy roa izy, izay ny iray nilaza ny tenany ho miasa ao amin'ny ‘National Intelligence Service’ (NIS), na ny Sampan-draharaha Fitsikilovana, io no mitovy amin'ny FBI ao Korea Atsimo.
Izany dia nanamafy ilay filazana fa ny governemanta dia tena manara-maso antokon'olona maro be ary nahatonga ny fahatezeran'ny daholo be tanaty aterineto. Baek Chan-hong (@mindgood ) dia nandefa bitsika hoe  [ko] :
Ankoatran'i Kim, iray amin'ireo mpihira rock malaza ao amin'ny firenena, Yoon Do-hyun, ary i Kim Mi-hwa, mpanao hatsikana sady reny mpiahy no mpanentana amin'ny onjampeo, dia ninoana koa fa tao anatin'ilay lisitra fanaraha-mason'ny fanjakana  [ko] taorian'ny fanasokajiana azy ireo ho ‘mpanentan'ny antoko ankavia’.
Ilay mpampiasa Twitter @cinemAgora  dia nandefa bitsika  [ko] hoe :
Ilay mpanao tsikera ara-kolotsaina malaza, nefa koa maha-be resaka ao amin'ny firenena , Chin Jung-kwon (@unheim ) dia nandrisika ny mponina mba hifidy [ko] hanasaziana ny governemanta sy ny antoko eo amin'ny fitondrana. Hisy fifidianana solombavambahoaka hatao ny herinandro ho avy izao ary ny fifidianana Filoham-pirenena dia hatao ny volana Desambra amin-ity taona ity.
Mr. Chin dia nanadihady  [ko] ny fiftsimbadihan'ny fahefana vokatry ny tontolo iainan'ny media vaovao :
Ireo mpanentana izay narahan'ny fanjakana maso ireo dia tena mpampiasa Twitter mafana fo be ihany koa. Isak'izay lasa lohateny vaventy ny bitsika alefan'izy ireo , dia miainga manaraka izany ny resaka raha toa ny governemanta na ny orinasa mampita vaovao ka tokony hametraka toro-làlana hentitra amin'ny fampiasana Twitter ho an'ireo olona to teny. Ilay mpampiasa Twitter @tsbre  dia naneho ny heviny  [ko]:
Ny fiadiadiana ny Lapam-panjakana dia nanambara  [ko] fa ny ankabeazan’ ireny raharaha fanaraha-maso ireny  dia voarakitra ao amin'ny antontan-taratasin'ny governemanta izay efa tamin'ny fitondrana teo aloha. Kanefa nandà  ny mpanao gazety sasany [ko] tamin'ny filazàna fa ny governemanta teo aloha dia niompana tamin'ny fisavana ireo mpikambana ao aminy, ary ity ankehitriny ity dia manao ireo olon-tsotra ho lasibatra.
Ilay mpampiasa Twitter @yaaacool  [ko] dia naneho ny tsy hafaliany tamin'ny fijereny ny governemanta sy ny mpanohana miala andraikitra amin'ilay olana ary nanampy izy tamin'ny filazana fa mampahatahotra azy io fanaraha-maso atao ny olon-tsotra io satria ny olona rehetra dia mety hiharan'izany koa .
Tamin'ny herintaona ny Freedom House (Tranon'ny Fahalalahana ) dia nampidina ny laharana  misy an'i Korea Atsimo hiala tamin'ny ‘Malakaka’ mankamin'ny ‘Malalaka amin'ny ampahany ‘ mba hanehoana ny fiakaran'ny sivana ataon'ny manampahefana sy ny ezaky ny governemanta hanindry ireo mpampaka vaovao sady hanivana ny votoaty ety anaty aterineto.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/05/16/31720/
 Lapan'ny Filoha : http://en.wikipedia.org/wiki/Blue_House
 Tantara Ratsy Watergate Koreana: http://www.hani.co.kr/arti/international/japan/526312.html
 izay mampiseho: http://english.hani.co.kr/arti/english_edition/e_national/525840.html
 dia nandefa bitsika hoe: http://twitter.com/#!/mindgood/status/186575014122881025/embed
 lisitra fanaraha-mason'ny fanjakana : http://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20120402500012&ref=nc
 dia nandefa bitsika : http://twitter.com/#!/cinemAgora/status/186595646764101632/embed
 Red Complex : http://www.koreaherald.com/opinion/Detail.jsp?newsMLId=20120402000361
 dia nandrisika ny mponina mba hifidy : http://twitter.com/#!/unheim/status/186805991894040576
 dia nanadihady: http://twitter.com/#!/unheim/status/186727175867740160
 dia naneho ny heviny : http://twitter.com/#!/tsbre/status/186647575082971136
 dia nampidina ny laharana: http://www.freedomhouse.org/report/freedom-press/2011/south-korea